Rado Ramaherison: « Mila hanaovana ezaka ny fandikan-teny » | NewsMada
Rado Ramaherison: « Mila hanaovana ezaka ny fandikan-teny »
Hankalazaina ny 30 septambra ny « Andro iraisam-pirenena ho an’ny fandikan-teny ». Mandray anjara amin’ny fanamarihana izany i Madagasikara. Manao ahoana ny lanjan’ny fandikan-teny ho an’ny Malagasy ? Milaza ny heviny i Rado Ramaherison, mpanoratra.
Gazety Taratra (*) : Ho avy tsy ho ela ny 30 septambra, « Andro iraisam-pirenena ho an’ny fandikan-teny ». Ny lanjan’izany amin’ny asa soratra eto an-toerana ?
Rado Ramaherison (-) : Tsy ampy ny fandikan-teny eto amintsika. Na raha manao fandikan-teny isika, toa teny frantsay ihany no iasana kanefa raha io teny io, raha tsy diso ny fitadidiako, laharana faha-5 ao amin’ny Firenena mikambana. Amin’ny lafiny iray, tsy mahagaga loatra satria nozanahin’i Frantsa isika. Amin’ny endriny hafa indray anefa, mampieritreritra satria zara raha misy 15%-n’ny Malagasy no mampiasa teny « vary amin’akotry ». Izany hoe, tsy tena teny frantsay madiorano fa mifangaroharo amin’ny teny malagasy.
* Ilain’ny Malagasy ve ny fandikana ny asa sorany amin’ny teny vahiny ?
– Eny, tena ilaina tokoa satria io no anisan’ny lalana hahafahan’ny asa soratra mivelatra amin’ny sehatra lehibe io. Mila ezaka sy finiavana lehibe anefa ny fanatanterahana izany. Anisan’ireny ny fametrahana foibe kolontsaina malagasy any ivelany. Any amin’ireny ny hametrahana ny fandikan-teny vita. Aza hadinoina koa anefa fa raha tena mirotsaka amin’ny fandikan-teny isika, tsy voatery ny asa soratra amin’ny teny malagasy ihany no adika amin’ny teny vahiny fa ny an-dry zareo ihany koa, mila adika amin’ny teny malagasy.
* … Ka na ny foibe kolontsaina malagasy aza, tsy mbola misy eto an-toerana ka amin’ny fomba ahoana no hisian’izany any ivelany ?
– Na efa mankaleo ny sasany aza ity holazaiko ity, averiko eto ihany : fametrahana ny kolontsaina amin’ny toerana tokony hisy azy. Fampiharana ny politikan’ny kolontsaina. Mila tanterahina ireo fa tsy hajanona am-bava na ao anaty taratasy fotsiny. Amin’izay fotoana izay, ho tonga eny am-pelatanan’ny mpamaky ny boky misy ny fandikan-teny. Izay tsy ho afa-manjifa izany, afaka manatona ny trano famakiam-boky na ny foibe kolontsaina malagasy. Ampy hanaovana izany ange ny fampiharana ny politikan’ny boky e !
* Mbola maro ny tsy mahay mamaky teny eto Madagasikara, sao mba mila itadiavana paikady hafa ny fanelezana ny asa soratra sy ny fandikan-teny ?
– Ny ankamaroan’ny radio mitsangana ara-dalàna eto Madagasikara, saika manana fandaharana momba ny asa soratra avokoa. Tsy afaka ny hanenika manerana ny Nosy anefa izy ireny noho ny lalàna misy eto. Maninona raha ovaina ny lalana mifehy azy ireny ? Tsy azo atao angaha izany ? Raha izay no tanteraka, hanana ny lanjany lehibe ny asa soratra sy ny fandikan-teny.
Nitafa : HaRy Razafindrakoto